Router Set Up Archives - 192.168.8.1
A router ibhokisi rinopa maPC mazhinji, mafoni, nezvimwe zvakawanda kujoina zvakafanana network, kazhinji router inosanganiswa kubva ipapo kuenda kumodem kuti ipe Internet inobatanidza kune chero gadget yakabatana neiyo router. Iri bhuku rinoedza kukubatsira kuburikidza neyekutanga nguva Setup yeTP-Link Router.
Mumudziyo unogona kunge uine zvinhu zvishoma:
Iyo router's chargeror magetsi magetsi
Chinyorwa chekushandisa mudziyo
USB tambo (yezvishoma inogadzira)
Dhirairi disc (yezvishoma zvinogadzira)
Network tambo (yezvishoma inogadzira)
TP-Batanidza Router Setup
Kana iwe wakatenga yazvino TP-Link Router, saka kugadzirisa iyo router & kuimisa iri nyore kwazvo. Unogona kushanda nesimba kumisikidza iyo nyowani TP-Unganidzo yeWi-Fi router uye unogona kuishandisa.
chitsamba: Kuti ubatanidze neinternet, iyo router inofanirwa kuve yakabatana neiyo data jack kana inoshanda modem.
Kumisikidza iyo itsva TP-Link Router inonamira kune ino gwara
Chinja pane iyo router & batanidza komputa yako kune iyo router netambo yeEthernet.
Kana uchinge wabatanidzwa, shanyira webhu browser uye enda ku www.muzvide.net kana 192.168.0.1
Gadzira iyo router login password nekuinyora kaviri. Zvirinani kuichengeta chete- "admin".
Rova Ngatitangei Kutanga / Kupinda.
Pakarepo, tevera pa-online rairo & gadzirisa iyo Internet & Wireless Network neiyo Swift Setup sarudzo.
Nyora iyo (SSID) zita reiyo Wireless Network mumunda & zvakare, isa pasiti yekutora kuti uwane maWi-Fi network.
Nekudaro, iwe unogona kupedzisa maitiro, kana iwe ukangobatana neiyo Wireless Connection neiyo SSID ine password.
Bvisa router, modem, uye PC.
Unganidza modem muWAN port yeTP-Link router kuburikidza netambo yeEthernet; batanidza PC kune TP-Link router raLAN chiteshi kuburikidza iyo Ethernet waya.
Chinja pane iyo router & PC kutanga & inotevera modem.
Kupinda kune iyo webhu-yakavakirwa manejimendi peji reti ye router ndokumbira utarise
Gadzira Typeof WAN Kubatanidza
Pa manejimendi rewebhu peji re router, tinya Network > WAN pawebhu peji kuruboshwe:
Chinja Rudzi rweWAN Kubatanidza kune PPPoE.
Nyora iyo PPPoE zita rekushandisa & password izvo zvinopihwa neIPP.
Dhinda Sevha yekuchengetedza yako marongero, gare gare iyo router ichave yakabatana neInternet mushure menguva yakati.
Mirira mashoma masekondi & ongorora iyo WAN chiteshi pane iyo Status webhu peji, kana ikaburitsa imwe IP kero, iyo inoratidza kubatana pakati peRoot & iyo Modem yakavambwa.
Kana pasina iyo WAN IP kero & isina nzira yeinternet, ingoita Power Cycle sezviri pazasi:
1. kutanga Bvisa iyo DSL modem & kudzima iyo router & PC kudzima, & chengetedza iyo kwemaminetsi maviri;
2. Zvino Batidza DSL modem, mirira kusvikira modem yatanga kumisikidzwa, wobva wadzvanya iyo router & PC yako zvakare.
Netambo yeEthernet tungamira kune yakakosha router yako TP-Link router kuburikidza neRAN ports. Ese mamwe maLAN ports pane TP-Link N router zvino anozopa Internet kuwana kune zvishandiso.
Categories Router Gadzirisa Leave mhinduro